Tifatiraha PhotoScape X Photo for Mac ayaa lagu cusbooneysiiyay waxyaabo badan oo cusub | Waxaan ka socdaa mac
PhotoScape waa software tafatirka sawirada oo aad u fudud in la isticmaalo, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon bilowga. Waxay leedahay qalab tafatir badan oo ku jira daabacaadda bilaashka ah iyadoo cusboonaysiinta cusubna xoogaa lagu daray. Waxay sidoo kale u muuqataa waxyaabo badan oo ah inaad awood u leedahay inaad ka dhejiso boodhadhka si aad u furto feyl cusub halkii aad kaydsan lahayd faylka marka hore ka dibna fur. Tayada wanaagsan ee aan dhamaadka lahayn ayaa ka dhigtay barnaamijkan mid tixraac ah hadda waxay noo keeneysaa cusbooneysiinteeda cusub.
PhotoScape waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay midka ugu caansan barnaamijyada tafatirka sawirrada adduunka. Iyada oo leh qalab fara badan oo nolosha u fududeynaya hiwaayadda iyo tifaftiraha xirfadeed. Waxa ugu fiican waa in barnaamijku u yahay lacag la'aan Mac-yadayada. Hore ayaan u soo bandhignay qaar ka mid ah wanaaggiisa mararka qaarkoodna horay ayaan kaaga soo sheegnay arjigan aadka u wanaagsan.
Hadda waxaan ka heli nooca 4.1.1 oo ay kujirto astaamaha cusub ee soo socda:
Qoraalka: hooska dheer, dusha sare iyo maaskaro, sooyaal
Waxyaabaha: hooska dheer, dusha sare iyo maaskaro.
cusub miirayaasha: gradiac opacity, khadadka xawaaraha shucaaca, khadadka, iskuxirka, jooniska joomatari.
cusub walxaha shaandhada: Sida tusaale ahaan shaandhada muraayadda qabow.
cusub qoraalka qoraalka: dusha sare iyo hoose.
Cusub koobi oo dhaji howlaha walxo badan, ku dar unug madhan (Daabac tab), rog rog / taagan / shay
La hagaajiyay isbeddel shay
Qalab fara badan ayaa lagu daray qaab burushyo sawir ah, burushyo wasakhda wasakhda ah, jiingado jiingado iyo waxyaabo kaloo badan.
Waxaad ku arki kartaa dhammaan wararka bogga rasmiga ah ee Mac App Store. Waxaan xasuusnaa in qeexitaannada aan ku isticmaali karno PhotoScape on our Mac waxaan u baahanahay inaan haysano ugu yaraan macOS 10.12 ama goor dambe la rakibo. Aad uma baahna RAM, sidaa darteed waxaan ugu isticmaali karnaa kumbuyuutar kasta.
PhotoScape X - Tifatiraha Sawirkafree
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » PhotoScape X Photo Editor ee Mac ayaa lagu cusbooneysiiyay waxyaabo badan oo cusub
Dhacdada Apple, Dukaammada Boqortooyada Midowday oo xiran iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac